Zororo rekunze fenicha wicker cheya uye tafura rattan gadheni chigaro seti, Kunze Fenicha kubva kuChina paTopChinaSupplier.com
Foshan Shiguang Fanicha Co, Ltd.
Outdoor Furniture, Deck chair, Basket chair, Cane chair, Outdoor sofa
OEM, ODM, Vamwe
SHIGUANG Fumiture co,LTD has been established since 2005. It was firstly famous for custom-made fashion hotel furniture. Its stylish outlook professional production process, and high-quality material...
Supporter Mapeji fenicha Outdoor Furniture Varaidzo yekunze fenicha wicker chigaro netafura rattan gadheni chigaro set
Varaidzo yekunze fenicha wicker chigaro netafura rattan gadheni chigaro set
1 Set US $ 80.00 / Set
Rattan / Wicker, Rattan Kunze Ificha
Outdoor , hotel, holiday resort,patio.
Rattan Kunze Fenicha
Kunze Kwemazuva Ano
Iyo kambani kwete only ine irinani manejimendi manejimendi, asi zvakare ine simba, inoshanda uye inehunyanzvi R & D timu. base pamakore gumi nematanhatu eruzivo rwekugadzira fenicha, kambani yakaumba yakaenzana maitiro ekugadzira. Izvo zvinoenderana ne international inoomesera zviyero, zvinosanganisira kusarudzwa kwezvinhu, kucheka, kukuya kubheka, kuyedza uye kurongedza. Maitiro ega ega akaedzwa zvakaomarara, saka zvigadzirwa zvakasimbiswa neSGS.
Mubvunzo: Iwe uri wekugadzira here?
Mubvunzo: Ndeipi nguva yako yekuendesa?
A:Needs 20-25days after payment receive and shop drawing /confirm / ied.
Q: Ndeipi yako mitero yekubhadhara?
A: Cash, Ali Express Escrow, Paypal, West Union, Money Gram, Bank Transfer, T / T uye L / C zvese zviripo.
Mubvunzo: Chii chako garandi?
A: Makore maviri waranti.
Mubvunzo: Unoita sei iwe control the quantity normally?
A: Isu tinowanzo tarisa mhando imwe neimwe usati warongedza kunze kwekunge paine hukuru hwakakura uye isu tichaongorora ne muzana maererano.
Ger rumwe ruzivo, Ndokumbirawo mubatanidzwantact isu.
China Stainless Simbi Tsika Logo Wine Tumbler Yakawandisa Migwagwa Inowanikwa
US $ 6.35 / Zvimedu
Aluminium firati rattan tafura nemacheya ane wicker dhiraini
US $ 257.00 / Set
China Direct Vanogadzira Vagadziri veHurumende Mask yeMunhu
US $ 0.25 / Zvimedu
isingadhuri kaviri setari inorema basa reku swing chair
US $ 124.00 / Peece
Biti Chigaro Inosimudzira Brisbane Kunze Rope Ficha neKofi Tafura
US $ 402.57 / Sets
vana wicker chair
Leisure outdoor furniture wicker chair and table
US $ 80.00 / Set
Cane Kunze Balcony Fenicha Round Rattan Nest
US $ 285.00 / Set
Rattan panze pamubhedha wicker fenicha yekunze s
US $ 635.00 / Set
Modern design rattan sun lounger chaise furnitur
US $ 5235.00 / Sets
New Design Rattan Outdoor Sun Lounger Wicker Poo
US $ 150.00 / Set
Ms. SG FOSHAN